Midabbada Adhijirka Jarmalka: Liis Dhamaystiran Dhammaan 13 Midabbada Coat ee La Aqoonsaday - Taranka
Midabbada Adhijirka Jarmalka: Liis Dhamaystiran Dhammaan 13 Midabbada Coat ee La Aqoonsaday
Daacadnimo, adeecid, ilaalin, shaqo-badan, caqli badan iyo oh-so-jecel - kuwani dhammaantood waa sifooyin aad u weyn oo loo adeegsado eeyga Shepherd German.
Laakiin, ka warran muuqaalkooda?
Waxaad u badan tahay inaad aragtay midab jaakad Jarmal Shepherd midab madow iyo tan ; tani waa tan ugu caansan uguna fudud ee lagu garto kala duwanaanta.
Ma ogtahay inay jiraan 13 midab oo Jarmal Adhijir ah.
Laga soo bilaabo caddaan ilaa madow, buluug ilaa casaan, kala duwanaanta midabka jaakada Jarmalka Shepherd waa liis dheer. Qaybta ugu wanaagsan ee midabkeedu yahay midabku runtii qaybna kama ciyaarayo xaaladaha caafimaad, dabeecad ama dabeecad ahaanba.
Midab kasta oo jaakad ahi wuxuu ku siinayaa macluumaadka adeegsiga taariikhda Shepherd, markaa isdeji oo ku raaxayso sida aan midab kasta ugu sharaxno Adhijirka Jarmalka si faahfaahsan.
1. Adhijiraha Madow iyo Tan Jarmal
2. Adhijire Jarmal Madow iyo Kiriim ah
3. Adhijirka Jarmal Madow iyo Casaan
4. Adhijir Jarmal ah oo Silver ah
5. Beerka Jarmalka Adhijirka
6. Adhijir Buluug Buluug Jarmal ah
8. Grey German Shepherd
9. Adhijirka Jarmalka ee Sable Sable
10. Adhijir Jarmal oo laba-midab leh
11. Adhijirka reer Jarmal ee Panda
12. Adhijir Jarmal Caddaan ah
13. Adhijirka Jarmal Madow
Midabka jaakad ee ugu caansan adhijirrada Jarmalka hubaal waa madow iyo madow.
In kasta oo ay taasi run tahay, midabka madow iyo tan ayaa dhab ahaan ka mid ah hiddo-wadaha recessive-ka marka ay timaado midabaynta.
Midabka madow ayaa badanaa soo muuqda dhabarkooda oo ah 'koorso' , sidoo kale waxay leeyihiin madow lagu daabacay wejigooda sida maaskaro.
Midabaynta midabku waxay badanaa ku taal laabta, dhinacyada, hoosta hoosta iyo qoorta.
Midabka midabku wuu ku kala duwanaan karaa iftiinka ama mugdiga madow eeyo kala duwan ; guud ahaan qoto dheerida tanku waxay ku saleysan tahay waalidiinta iyo dhaxalka hidaha.
Ey yaryar ahaan, midabka jaakadan ayaa u muuqda mid ka madow tan tan, sikastaba markay bislaadaan (oo ay kabaxaan dhogorta eyda qalafsan ee jilicsan) jaakadoodu waxay ufududeeysaa inbadan oo midab buluug ah.
Adhijirro caan ah oo Jarmal ah oo leh midabkan jaakadda ah waxaa ka mid ah Rin Tin Tin , waana jaakad ugu fiican tartamada bandhigga.
A Shepherd Jarmal madow iyo kareem ah waa midab aad u caan ah noocyadan.
Madoowga iyo kareemka Jarmalka Shepherd waa si fudud kala duwanaansho khafiif ah oo ku saabsan fikirka khaldan ee madow iyo tan.
Dhabarkooda waxaa ku daboolan qaab u eg koofiyad madow waxayna sidoo kale yeelan doonaan maaskaro dhogor madow oo wejigooda daboolaya.
Farqiga ayaa ah jaakadani waxay leedahay hooska khafiifka ah (oo u eg midabka cappuccino caano lagu qasay) oo ka soo horjeeda tan.
Midabbada madow ee ka dhanka ah dhogorta kareemkooda ayaa runtii xoojin kara astaamaha madow ee quruxda badan.
Dharka Shepherd Jarmal ee madow iyo casaanka ah ayaa ah kala duwanaansho kale oo qurux badan oo ay u aqoonsan tahay Naadiga Kennel-ka Mareykanka sidoo kale.
Si ka duwan inta badan midabada ku jira liiska, midabkani wuxuu ku habboon yahay in la muujiyo khadadka dhiigga, kana soo horjeedda khadadka dhiigga ee 'GSD'.
Adhijirka Jarmal ee madow iyo casaanku wuxuu si adag ugu eg yahay kala duwanaanta madow iyo tan.
Hal farqi ayaa ah in meelaha midabada midabka leh lagu beddelay aagag bunni casaan leh. Midabkan casaanku aad ayuu uga xoog badan yahay midabka tan.
Meelahan casaanka ah waxay mararka qaar u muuqdaan kuwo midab khafiif ah leh (tusaale.
Midabka madow ee dhogorta ay kuleedahay wali waa lamid yahay kala duwanaanshaha kale oo leh calaamadda garka u eg madow iyo astaamaha maaskaro madow.
Meelaha midabada madow ee waaweyn iyo kuwa caanka ah ee dhogorta ayaa wali ah kuwo isku mid ah, iyadoo midabka madow uu ka muuqanayo wejigooda wajiga sida maaskaro iyo dhabarkooda oo ah 'koofiyad'.
Midabkani jaakad lacag ah weli waa kala duwanaansho kale oo qurux badan oo noocaan ah.
Eeyahaani waxay ka yimaaddaan khadadka dhiigga ee adhijirka Jarmalka.
Adhijirro midab khafiif ah leh ayaa caan ka ah faraantiyada showga marka loo eego kuwa leh muuqaal madow oo xoog badan.
Sayniska saxda ah ee ka dambeeya muuqaalkooda qalinka wali si buuxda looma fahmin, sababtoo ah garaaciddooda si kastaba ha noqotee, waxaa loo maleynayaa inay tahay oo ay sababtay astaamo dib-u-habeyn .
Muuqaalka Shepherd qalin waa wax badan oo u eg kala duwanaanta madow iyo tan; faraqa kaliya ayaa ah qalinka oo badalaya astaamaha maqaarka ee balaaran.
Waxaa laga yaabaa inuu yahay mid ka mid ah midabada Jarmalka Adhijirka ah; daahan midabka beerka ee Shepherd Jarmal waa nooc kale oo qurux badan.
Midabka beerka, halka ay aad ugu badan tahay noocyada kale , waxaa u sabab ah hidda-wadeyaasha
Tan macnaheedu waxa weeye in midabka “beerka” uu yahay astaamo ay tahay in lagu qaado hiddo-wadaha labada sheer iyo biyo xireenka si ay uga dhex muuqato eeyga.
Muuqaalka jaakada beerka waa sida ay u eg tahay oo ka duwan midabada badankood ee ku jira liistadan ma haystaan ​​meelo madow oo maaskaro iyo sadar yahay.
Si kastaba ha noqotee, weli waxay leeyihiin maaskaro, iyo koorso, si kastaba ha noqotee badanaa waa midab madow ama midab qoto dheer oo midab leh aagaggaas.
Cunnadan beerka leh ee dahaarka leh ayaan caan ka ahayn goobaha wax lagu daawado sababo la xiriira hiddo-wadayaashooda “la qasi jiray” waxaana loo arkaa khalad halis ah heerka caadiga ah .
Ma ogeyd eeyadan inay badanaa leeyihiin indho buluug ah.
The bulug adhijirka Jarmalka waa kala duwanaansho midab yaab leh taas oo ah mid aad dhif u ah.
Si kastaba ha noqotee, sida midabka beerka ee Shepherd Jarmal, kala duwanaanta midabkani ma awoodo inuu ku tartamo bandhigyada maaddaama lagu dhawaaqay khalad culus.
In kasta oo lagu sifeeyay cilad aad u daran, midabkan wali waxaa aqoonsan Naadiga Xannaannada Mareykanka.
Midabka buluuga ah ee kala duwanaanta jaakadani waa uun farqiga u dhexeeya oo waa loo aaneeyo hiddo-wadaha buluugga ah ee recessive recessive.
Taranka buluuga ah ee Jarmalka ah ee loo yaqaan 'Shepherd puppy' waxay u baahan tahay labada waalidba inay wataan hiddo-wadaha noocan ah.
Helitaanka nooc buluug ah waa mid aad dhif u ah, maadaama aan loo soo saarin inay shaqeeyaan ama muujiyaan khadadka, waana xulashada moodada oo keliya.
Farqiga muuqaalka weyn ee buluugga Jarmalka ee Shepherd waa sankooda cawlan halkii mid madow.
Adhijirka suufku wuxuu ka yimaadaa khadadka shaqada.
Midabka jaakad jilicsan ee Shepherd Jarmal waa midabbo caadi ah oo ay sababeen “Agouti” hidde-wadaha weyn.
Ma ogeyd Adhijirka Jarmalka ee ugu horeeya inuu haysto jaakad jilicsan?
Magaciisu wuxuu ahaa Horand von Grafrath wuxuuna dhashay 1895. Tani waxay muujineysaa sida qoto dheer ee midabkani ugu socdo taariikhda hiddo-wadaha Jarmalka Shepherd.
Adhijir caato ah uma caan aha sida midabka madow iyo tan; taas oo layaab ku noqotay dad badan oo ay ugu wacan tahay taariikhdeeda hidde.
Si kastaba ha noqotee, dad badani waxay jecel yihiin muuqaalka muuqaalka madow iyo tan sidaa darteed kuwa wax soo saara ayaa si gaar ah u dhajiyay khadkan.
Midabaynta suufka ee Adhijirka Jarmalku ma aha midab adag oo hal timo ayaa dhab ahaan noqon kara isku-darka iftiinka ilaa midabka madow; tani waxay abuureysaa saameyn ombre ah.
Qaar ka mid ah timaha jilicsan ayaa badanaa u roga madow dhinaca caarada dhogorta.
The Gray German Shepherd waxaa badanaa lagu wareersan yahay qalin, madow ama xitaa buluug GSD. Si kastaba ha noqotee, midabkani dhab ahaantii waa kala duwanaansho midab kala duwan oo ay aqoonsan tahay Naadiga Kennel American.
Eydan waxay ku dhasheen indho qurux badan oo buluug ah!
Markay bislaadaan, indhahoodu waxay isu beddelaan midab malab ah ama bunni khafiifa.
Midabka adhijir Jarmal ee cawl waxaa soo saaray hiddo-wadaha (sida sable).
Midabaynta Gray waxay ka timaaddaa milanka hiddo-wadaha midabbada madow, taas oo ka dhigaysa kala duwanaanta midabkan Shepherd Jarmal inay u muuqato wax badan sida aabayaashood yeey .
Ey yaryar oo casaan ah ayaa fududahay in la yimaado maaddaama ay aad caan u yihiin.
Midabka casaanka ah ee Shepherd casaanka ah waa kala duwanaansho kale oo ku saabsan jaakadooda suufka ah taas oo ay ugu wacan tahay hidda-wadaha awoodda leh.
Hidda-wadayaashaan si kastaba ha noqotee looma qasiin sida Shepherd cawlan oo kale, jaakadani midab casaan qoto dheer leh ayaa beddelay tankii caadiga ahaa ee muuqaalka muuqaalka.
Midabkani midabkiisu wuxuu isku dhex jiraa cas iyo madow meelo badan oo ka mid ah jidhkooda.
Midabkani wuxuu ka yimaadaa khadadka dhiigga ee xoog badan ee shaqada.
Kala duwanaanta dharka madow iyo tan madow ee Shepherd Jarmal waa midabka midabada midabada leh.
Koodhka laba-midab leh wuxuu ka kooban yahay madow iyo midab labadaba iyada oo farqiga u dhexeeyaa ay tahay in noocani uu ka madow yahay tan madow muuqaalkooda.
Midabka madow ee jaakadoodu waxay noqonkartaa mid awood leh sida 9: 1 madow ilaa tan.
Adhijirrada isku-dhafka ah ee laba-midablaha ah ayaa lagu khaldamaa adhijirro Jarmal madow oo saafi ah.
Si kastaba ha noqotee, haddii Shepherd Jarmal ah uu muujiyo calaamado kasta (haba yaraadee) oo midab ah iyada oo loo marayo dhogorta madow, markaa dhab ahaantii waxaa loo kala saaraa inay yihiin laba-midab.
Midab-Jarmal laba-midab leh waxaa caan ku ahaa ku noolaanshaha Aqalka Cad ee Mareykanka u gaarka ah .
John F Kennedy iyo qoyskiisa waxay ahaayeen hantiilayaal ku faanaya Shepherd midabkiisu midabkiisu yahay midab oo ku baxay magaca Klipper.
Adhijirka reer Jarmal ee labada midab leh ayaa caan ku noqonaya muuqaalkiisa cajiibka ah.
Midabada ugu caansan Jarmalka ee Adhijirka ah waxaa loo yaqaan 'Panda'
Muuqaalka Panda waa sida saxda magaceeda; waxay aad ugu egyihiin jaakadda Panda.
Xagee ka yimaadaa adhijirka reer Jarmal ee Panda Jarmal maxaa u dhif iyo naadir ah?
Adhijirka 'Panda Shepherd' waxaa laga soosaaray adhijir Jarmal saafi ah; sidaas oo ay yihiin ma aha nooc isku dhafan .
Eygan yar wuxuu ka yimaadaa khadadka dhiiga ee GSDs:
Hooyadeed waxay leedahay dhogor madow oo saafi ah
Aabaheed wuxuu leeyahay midab madoow oo midab madow ah
Sababta ay aad ugu yar yihiin, iyo sababta ay ugu egyihiin noocyada caadiga ah, maxaa yeelay waxay muujinayaan isbeddel hidde ah oo dhif ah.
Isbeddelkani waa dhif iyo naadir in lagu qaado oo keliya hal xariiq oo Jarmalka Shepherd bloodline ah.
Panda wali wuxuu leeyahay midab madow iyo midab caadi ah, si kastaba ha noqotee, isku-dhafkooda hidde-wadaha ayaa sababa dhibco cad.
Xaqiiqdii, ilaa 35-40% jirkoodu waa cadaan.
Waxaa la yaab leh, iyagu ma lahan Adhiyiin Jarmal cadaan ah oo ku abtirsada awgood eeygan muuqaalkiisa waxaa u sabab ah hidde-wadahahooda.
Adhijirka reer Jarmal ee cad waa mid ka mid ah midabada aan caadiga ahayn ee Jarmalka.
Waa aaminaad caan ah in jaakadani kala duwanaanta Jarmalka Shepherd ay tahay albino, hase yeeshe, tani waa khalad.
Adhijirka cad ee Jarmalka waa maaha cudur hidde ah oo loo yaqaan 'albinism' taas oo lagu garto heerka wax soo saarka melanin oo hooseeya.
Koodhkan cad waxaa si fudud loogu sababeeyaa hiddo-wadaha.
Maadaama ay dhif tahay, midabka cad waa sifo recessive. Tan macnaheedu waa in labada waalidba ay u baahan yihiin inay qaadaan hidda-wadahaas si loogu horumariyo caafimaad qab, cadaani Jarmal cadaan ah.
Habka ugu fudud ee lagu hubin karo eeyo cadaan ah, ayaa ah in lala kulmo sire cad iyo biyo xireen cad.
GSD cad ayaa markii hore loo maleynayay in lagu soo saaray khadadka shaqada, si kastaba ha noqotee waxaa loo arkay inay tahay dabeecad daciif ah ee xoog leh, eey shaqeynaya sidaas darteedna baabi'inta midabkani waxay bilaabatay.
Maanta midabkan wali looma aqoonsan tartamada oo dhan waxaana si dhaqso ah uga reebay Naadiga Kennelka Mareykanka.
Caadi ahaan loo yaqaan adhijir Jarmal madow ah , Kala duwanaanta midabka madow ayaa dhab ahaantii soo jiidasho leh.
Sida GSD-ga caadiga ah, noocani wuxuu soo bandhigi karaa dherer dhexdhexaad ah ama jaakad dherer dheer ah.
Midabaynta Adhijirkaan Jarmalka ah waa madow adag.
Haddii eey leedahay midabbo kale oo ku yaal dhogorta, markaa iyagu waa Adhijir Jarmal oo laba-midab leh.
Waa caqiido guud oo ah in Black Shepherd Jarmalku leeyahay dhabarka toosan marka loo eego walaalahooda midabka caadiga ah, si kastaba ha ahaatee tan wali cilmi baaris laguma xaqiijin.
Waxaa laga yaabaa inaad la yaabto inaad ogaato in astaamaha madow uusan ahayn hiddo-wadaha xukuma. Xaqiiqdii, astaantan midabka madow waa hidda-socod recessive!
Marka eey yar oo madow caadi ahaan waa natiijada taranka laba waalid madow, hase yeeshe, waalid madow iyo madow ayaa sidoo kale soo saari kara eey yar oo madow ah.
Ilaa iyo inta labada waalidba wataan hidda-wadaha madaw ee recess; markaa tan waxaa lagu muujin karaa qashinkooda.
Taasi waxay na keenaysaa dhamaadka liistada midabada adhijirka Jarmalka. Sida aad hadda akhrisay, waxaa jira waxyaabo badan oo laga ogaanayo eeyahaas sida aad u malaynayso.
Midab kastaa wuxuu soo bandhigayaa wax yar oo taariikhi ah oo muuqaalkooda ah, hiddo-wadaha iyo adeegsiga (yacni shaqada ama show-ga).
Laga soo bilaabo bunni iyo kareem ilaa casaan iyo madow, kala duwanaanshaha jaakadyadan dhammaantood waa kuwo aad u qurux badan oo qurux badan; ku habboon tan daacadnimada, caqliga, firfircoon, iyo jacaylka.
Marka ay timaado doorashada Adhijirka, dooro midabka jaakad aad ugu jeceshahay maaddaama aysan wax saameyn ah ku yeelanaynin dabeecadda, dhaqanka ama caafimaadka.
Keebaa ahaa midabka aad jeclayd ee Jarmal?
Tilmaamahaaga oo dhameystiran Madaxa Deerada Chihuahua
Eey u dhashay koonfurta africa boerboel
eeyaha isku dhafka ah ee shaybaadhka iyo rottweiler
shih tzu poodle mix dog
sanka cas ee Ameerikaanka ah ee loo yaqaan god bull Terrier
muxuu u eg yahay baranbaradu